‘थोरै गर्यौं, धेरै गर्न नसकेकै हो’ – Nirantarkhabar
‘थोरै गर्यौं, धेरै गर्न नसकेकै हो’
विराटनगर महानगरपालिकामा उपमेयर पदको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक वर्ष पुरा भएको छ । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
पक्कै पनि हामीले पाँच वर्षे कार्यकालको २० प्रतिशत समय विताइसकेका छौं । नयाँ संरचना, नयाँ व्यवस्था तथा नयाँ अनुभव भएका कारण जुन अपेक्षा जनताले गर्नुभएको थियो ति सबै पुरा भएका छैनन् । जनताले सोचे जस्तो गर्न सकेका कछैनौं होला तर जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता हामी इमान्दारिता पूर्वक पालना गरिरहेका छौं । हामी निरन्तर प्रयत्नरत छौं ।
जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेनौ भन्न खोज्नु भएको हो ?
बाटो बनाउने, नाला बनाउने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने लगायतका कामहरु भएका छन् । तर यी सबै नियमित कामहरु हुन् । एउटा वडामा हामीले २० लाखसम्म रकम पठाएर खाल्डा पुर्न भन्यौं । तर पोहोरको बाढी लगायत विभिन्न कारणले न्न कारणले आज उस्तै भएको छ । आज पुर्यो, भोली फेरी खाल्डो पर्छ । यो नियमित प्रकृया हो । तर हामी जन अपेक्षा पुरा गर्ने निरन्तर प्रयाशरत छौं ।
त्यसबाहेक देखिने किसिमको काम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं, अब गर्दैछौं । अहिलेसम्म देखिन काम भएको छैन । जनताको नजरबाट हेर्दा नगरपालिकाले यो गर्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन । नभएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । तर अब हामी गर्छौ । धेरै काम प्रकृयामा छ । जनताको अपेक्षा अनुसार हामी काम गर्छौ । अहिले गरेको कामको परिणाम पनि केही समयपछि देखिने छ । नियमित प्रकृयाको विकासभन्दा नयाँ तथा दिर्घकालिन प्रभाव राख्ने कामको अवस्था के रह्यो ?
यो विषयमा हामी सबै गम्भिर हुन आवश्यक छ । विराटनगर यतिबेला महानगर मात्र नभएर प्रदेशको राजधानी भएको छ । यसको आफ्नो पहिचान छ, आफ्नो अस्तित्व छ । जनताको अपेक्षा अनुसार हामी नमुना महानगर बनाउने प्रयत्नमा छौं । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रहरु तोकिएको छ । नीतिगत अस्पष्टताले कतिपय विषयहरु अलमलमा परेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारकोबीच पनि तालमेल नभएको अवस्था छ ।
त्यसो त, संघीयता हामी सबैको नयाँ अनुभव पनि हो । विषयवस्तु बुझ्न समय लागेको निश्चय नै हो । आ–आफ्नो अधिकार आफूले प्रयोग गर्न नपाएकै कारण यहाँ द्वन्द्व देखिएको छ र जनअपेक्षा अनुसार काम पनि हुन सकेको छैन । आवश्यक कर्मचारी नभएका कारण पनि महानगरले खास काम गर्न सकिरहेको छैन । हामीले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पाँचओटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने भनेर बजेट छुट्याइएको छ । छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड् बाँढ्ने योजना बनाएका छौं । कतिपय ठाउँमा छात्रामैत्री शौचालयसम्म नभएको अवस्था छ । त्यहाँ हामीले ध्यान दिइरहेका छौं । प्रथम सन्तान छोरी हुनेलाई प्रोत्साहन गरेजस्तै दोस्रो छोरी हुनेलाई पनि प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं । मेरो नेतृत्वमा छोरी बचाउ अभियानका साथ छोरी पढाउ अभियान संचालनमा अएको छ ।
त्यसबाहेक, विराटनगरको मुहालमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ हामीले आकाशे पुल साथै भ्यू टावरको निर्माणको कन्सेप्ट सोचिरहेका छौं । विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने हाम्रो योजना रहेको छ ।
पुरानो परियोजना अन्तर्गत विराटनगरमा विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । यसले आधा विराटनगरको सडक तथा ढल नालाको समस्या समाधान गर्छभन्ने अपेक्षा गरौं । यो योजना सम्पन्न भएपछि विराटनगर नियमित विकासमा मात्रै सिमित हुने त हैन ?
पहिलो वर्ष भएका कारण विकास निर्माण तथा अन्य देखिने गतिविधिकालागि कार्यक्रम ल्याउन सकिएन । तर हामी तयारीमा छौं । केही दाताहरुसँग कुरा गरिरहेका छौं । नयाँ कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । अहिले चलिरहेको एडिबीको परियोजनाबाट लगानीकर्ताहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । चाँडो काम भएको छ । कतैकतै काम नबिग्रिएको पनि होइन, तर पछि सपारिएको छ । विकास परियोजनाका लागि एडिबीले आगामी वर्षका लागि पनि नयाँ कार्यक्रमहरु दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि योजना ल्याउन पहल गरिरहेका छौं । हाम्रो मात्रै आयस्रोतले विकास निर्माणमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । तरपनि हामीले विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वय गरेर योजना बनाउने र कार्यक्रमहरु ल्याउने तयारीमा छौं ।
महानगरले भर्खरै बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सामान्य सर्वसाधारणमा करको भार अत्याधिक थपिएको गुनासो छ । करको दर किन बढाययो ?
कर बढेको भन्ने विषय बिलकुल होइन । बुझाईमा फरक परेको हो । भर्खरै बजेट सार्वजनिक भएको छ । विराटनगरलाई हेटौंडा नगरपालिकाको भन्दाकम बजेट आएको छ । हामीलाई पुर्याउनु पनि पर्ने छ । त्यसको अर्थ हामीले कर लिएर सबै पुर्याउन खोजेको किमार्थ होइन । अवस्था हेरेर कहिले बढ्ने वा कहिले घट्ने हुनसक्छ । तर जनतालाई मार पर्ने गरी बजेट बनाएजस्तो लाग्दैन । करको दायरालाई फराकिलो बनाएको मात्र हो । सर्वसाधारणले यो विषयलाई बुझ्नुहुनेछ ।
तपाई न्यायीक समितिको संयोजकमा हुनुहुन्छ । न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा तपाई व्यक्तिगत रुपमा कति सन्तुष्ट हुनुभयो ?
ऐनले दिए अनुसार मैले अधिकारको प्रयोग गरिरहेको छु । यहाँ मेयरले यो गर्ने, उपमेयरले यो गर्ने भन्ने कार्यविभाजन गरिएको छैन । मुख्य जिम्मेवारीको रुपमा रहेको न्यायीक समितिमा रहेर हामीले १० ओटा मुद्दा अदालतमा पठायौं । सात ओटा मुद्दा हामी आफैंले मिलायौं । मैले सुनुवाई गरेको मुद्दाहरु मध्ये एउटा दम्पतीको घर विभाजन हुनबाट जोगाउँदा भने म सबैभन्दा धेरै सन्तुष्ट भएको छु । एउटा मुस्लिम समुदायको परिवारमा श्रीमान श्रीमतीबीचको उत्कर्षमा थियो । श्रीमानले सम्वन्ध विच्छेदको माग गर्दै उजुरी गर्नुभएको थियो । त्यो विषय मैले ९ महिना लगाएर समाधान गर्न हिल गरें । अहिले दुवै जना मिलेका छन् । अदालतबाट पनि मुद्दा फिर्ता लिए । मिलाउन हुन्न भने दवाव पनि थियो तर घर बिगार्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यसको अध्ययन गर्यौं र मिलायौं । घरायसी विषयका मुद्दाहरु अधिकांश आउँथे । श्रीमान श्रीमती, बाबु छोरा, ससुरा बुहारीका झगडाका विषयहरु धेरै आउने । हामी आफुले सकेसम्म विषयवस्तु मिलाएर दुबै पक्षलाई हारेको अनुभूति नगराउँदै मुद्दा मिलाउने प्रयत्न गर्यौ
मोरङमा ६० प्रतिशत मुद्दा फर्छयौट
चीन आफैँ शरणार्थी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र हो, तिब्बतीयनमाथि प्रहार गर्न पाउँदैन